Maxaa loo gudaa hablaha Soomaaliyeed? – Kaasho Maanka
Gudniinku inuu dhib wayn ku hayo bulshada Soomaaliyeed gaar ahaan haweenka waan ognahay. Caafimaad darrada ka dhalata iyo xanuunka ay maraan haweenka la gudo maaha wax cid ka qarsoon, laakiin weli ma is waydiisey sababta loo gudo haweenka? Ujeedka iyo danta laga leeyahay jarjarista iyo tolidda xubinta taranka ee haweenka maxay tahay?
Gudniinku waa caado dhaqameed soo jirtey muddo kumanaan sano ah, dhammaan ama badi dadka ku nool Afrika way ku dhaqmi jireen. Bulsha kasta magacay doonto ha ugu yeedho siday doonaan ha u dhigeene ujeedku mid buu ahaa.
Bulshooyinka adduunka ku nool ee waayadii dhexe raggu hormuudka u noqday ilaa maantana yahay markay gudeyaan haweenka waxay ka duuleyaan laba aragtiyood oo aad u liita. Aragatida kowaadi waxay leedahay dumarka caqligoodu kuma filna sidaa darteed waa in la tolaa oo la jaraa xubintooda taranka. Waxay aaminsanaayeen haweenayda haddii aan la tolin inay wadhato noqonayso oo dhilloobeyso reerkana ceeb usoo jiideyso.
aragtida labaadina waa mid ku dhisan dhaqaale oo dad badan oo adduunka ku nool oo ay ka mid tahay bulshada Soomaaliyeed waxay ka macaashaan guurka hablohooda, sidaa darteed waa inay xubinteeda taranka tolaan si ay caddayn uga dhigaan markay iibineyaan inay tahay alaab aan hore loo taaban iyagoo filanaya lacag badan inay ku helaan.
João dos Santos (dhintay 1622) oo ahaa badmareen Burtuqiis ah, wuxuu sheegay mar uu Soomaaliya booqday oo ku beegnayd 1609, dadka Soomaaliyeed inay gudaan oo gebi ahaanba tolaan xubinta taranka ee haweenka addoonta ah si ay qiime fiican u yeeshaan marka la iibineyo (nasiib xumo Soomaalidu ka ganacsigii dadka diirka madaw waa ka qayb qaadatay).
Ibnu Qayim Al-Jawzi (dhintay 1351) kitaabkiisa la yidhaahdo (Tuxfatu Al-Mawduud bi Axkaami Al-Mawluud) wuxuu ku sheegay sheeko xariir odhanaysa: Markii la siiyey Ibraahim Haajira oo ahayd addoon markiiba uur bay qaaday halka arrinkaasi ku adkaa Saara. Uur qaadistaa degdega ah ayay ka hinaastay/masayrtay Saari, waxayna dhaar ku martay inay Saddex xubnood ka jarayso Haajira (berigii hore dadka la bahdileyo ama haweenka xaasaska boqorrada ka qurux bata una dhashay dabaqadaha hoose waxaa laga jari jirey sanka dhegaha iyo dibnaha) si ay u fool xumaato. Ibraahin markay kala degtey ee cadhadii ka ba’day ayuu yidhi dhegaha ka dalooli, kintirkana ka jar ama gud. Halkaa waxaa kaaga cad dulmiga ku dhacay maskiinta xorriyada laga qaaday ee la addoonsaday kadibna si qof kale loo raalli geliyo oo la masayr tiro la jarjaray. Qaar baa qiil ka dhigta sheeka xariirtaas oo ubadkooda guda.
Ujeedka gudniinku waa sida aan kor ku soo sheegaye wuxuu isugu soo biya shubtay dano dhaqaale balse la huwiyey shaadh diimeed ama mid dhaqan. Xiliyada qaar waxaa laga dhaadhiciyaa haweenka Soomaaliyeed inay iyaga sharaf u tahay in la gudo. Ka warran hadii lagugu sharfo jarista xubin jidhkaaga ka mid ah?
Gabadha Soomaaliyeed waxaa nolosheedii oo dhan lagu soo koobay oo jidhkeedii loo jarjaray, kadibna loo tolay inay guursato, reerkeeduna dhaqaale helaan. Iyada lafteedu maalinta la gudo wixii ka danbeeya waxay niyadda ku dhisataa ninka aad nolosha la wadaagi doontid xubintaadii oo ilaashan hadiyad u sii. Inantaasi isma waydiin ninku hantida uu kaa bixiyey ee waalidkaa qaatay marka laga yimaado muxuu habeenka kuu sida? Xubintiisa ma u ilaashan tahay sida taada oo kale?
QORMO LA XIRIIRTA: Ijaabo (Sheeko Faneed)
Gabadha Soomaaliyeed waxay eedday oo loo bahdilaa jidhkeedana loo tol tolaa si aanay u dhilloobin, haddii taasi run tahay hablaha yaa dhillooyin ka dhigay? Meeyey dhillaygi la dhillaystay dhillada? Dhillanimadu ma denbi ay haweenka keliyi galaan baa? Ninku inuu gabdho badan lasoo seexdo kadibna uu raadiyo gabadh tolan iyada lafteedu waa denbi wayn. Waxaan hubaa talada adduunku haddey haweenka gacanta ugu jiri lahayd in xubinta taranka ragga la toli lahaa iyagoo dumarku qiil ka dhiganayaan inay dooneyaan nin aan haween hore soo arag.
Ubadka yaan la jidh dilin si xoogaa shilimaad ah loo helo. Aduunkan aan maanta ku nool nahay waxaa la isla qirsan yahay in gudniinku yahay dhibaato jidh ahaan iyo nafsad ahaanba haweenka ku dhacda. Dadka, qaybta waxma garadka ahi waxay ku doodaan in gudniinka diintu dhigayso, haddii taasi run tahay, saw ma odhan karno wershedda Illaahay waa mid tayadeedu aad u liidato sida kuwa Shiinaha oo waxay soo saarta dad ay ku yaalliin xubno dheeraad ahi?
Qof ha u dullayn raalli gelinta qof kale, waalidka Soomaaliyeedna waa inay ka tanaasulaan iskana daayaan ka ganacsiga xubinta taranka gabdhohooda. Gabdhaha caqligoodu waa ku filan yahay hadday helaan daryeel la mid ah ka wiilasha. Ragguna waa inay iska daayaan nacsanimada oo aanay sabab u noqon fudueynta ficilkaa bahalnimada ah ama qiimaynta ay dheeraadka ah ee ay siiyaan gabdhaha tolan.
dhaqan Dumarka Soomaali
waan ku farxay markaa aqriyay waana rajeynaa in ay dad badani aqristaan kana waano qaataan, aniga waxaa lay guday labo mar, oo la dhahay midkii hore sidii la rabay ma noqon, oo mar labaad leygu celiyay. maanta nolosheyda kuma raxeysan karo dhaqtar ayaan galay xanuun dartiis marka aniga wey igu dhacday ee kuwa hada soo korayo aan ka hortagno inshaa allah.
waxaan jiraa 22 sano.
wax sax kuwa kale wa in laga bad baadshah
W/Q: Khaled Hassan 26th September 2018